Ama-Menards ngokwezifiso umatilasi kanye nomenzi webhokisi lebhokisi | Rayson
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. I-Menards Matiss kanye nebhokisi lebhokisi namhlanje, iRayyson ibeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi mayelana nomkhiqizo wethu omusha ama-Menards ama-Matress kanye ne-Box Springs kanye nenkampani yethu ngokuxhumana ngqo nathi.Lomkhiqizo wezemfashini amele ubunikazi, isimo sempilo, kanye nobukhoma babantu. Ithengisa kahle ngenxa yokwakheka kwayo okumnandi kakhulu abantu abaningi abakuthandayo.